Xog Ururin: Howlgalka Xasilinta Caasimadda oo Sababay Qasaaro Maaliyadeed oo Ka Badan $4.6 Milyan
Ciidan isku-dhaf ah oo isugu jira boolis iyo xoogga dalka Soomaaliya ayaa la hawlgaliyay si ay ammaanka u sugaan.
Tan iyo waqtigaas waxaa socda howlgalada lagu sugayo amniga caasimadda, hase-ahaatee howlgaladdaas waxa ay saameyn ku yeesheen dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isku-socodka dadweynaha.
Wixii ka dambeeyay qaraxii lala-beegsaday maqaayadda Pizaa House waxaa sii kordhay cadaadiska dadweynaha iyo ganacsatada ay kala kulmaan waddooyinka la gooyay ammaanka awgiis iyo waddooyinka kale ee ay buux-dhaafiyeen gawaarida la baarayo— oo keeneysa in ardayda ay dugsiyada ka daahaan, shaqaalahana ay shaqada ka habsaamaan.
Habka Xog Ururinta
Si aan ugu dadaalno saxnimada iyo sugnaashaha xog ururinta waxaan la kulannay dad aad u fara-badan oo ay kamidyihiin dadka ay sida tooska ah u taabaneyso (isguna jira wadayaasha gaadiidka iyo dukaanleyda).
Celcelis ahaan halkii bajaaj waxaa maalintiiba soo gali jirtay howlgalada kahor dakhli gaaraya 25.19 doollar, halka inta howgallada ay socdaanna uu soo galo 16.04 doollar oo markii aan boqoleey aan ka dhignana noqoneysa inuu jiro hoos u dhac dhan 36% ama $9.15
[Warbixintan lama qaadan karo iyada oo aan la xiganeyn Goobjoog Business. Sidoo kalena waxba laguma kordhin karo, waxna lagama badali karo]